अब सरकारको नितिमा मन्टेस्वरि अटाउनु पर्छ : कमला मल्ल लामा - Chitwan Online Khabar
अब सरकारको नितिमा मन्टेस्वरि अटाउनु पर्छ : कमला मल्ल लामा
९ भाद्र २०७७, मंगलवार २०:३०
चितवनमा मन्टेश्वरी सञ्चालकहरुको छाता संगठन Amps Chitwan रहेको छ । जस्मा चितवन जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकाङ्स मन्टेश्वरी अाबद्ध रहेका छन् । अहिले कोरानाको कहरमा मन्टेश्वरीको अवस्था निकै नै दयनिय रहेको अबस्थामा रहेका छन्। यस बिषयमा Amps Chitwan कि अध्यक्ष कमला मल्ल लामासंग गरिएको कुराकानि :-
१. बिश्वव्यापी महामारीले मन्टेश्वरी शिक्षा पद्धतीमा कत्तिको असर गरेको छ ?
▶ विगत लामो समय देखि कोरोनाको कहरमा सम्रग विश्वनै समस्यामा रहेकोले अहिले देशैभरीका शैक्षिकसंस्थाहरु बन्द रहेका छन । यसमा पनि मन्टेश्वरी अछुतो भने रहेको छैन । चितवनको सन्दर्भमा हेर्ने भने अहिले मन्टेश्वरीको अवस्था र यसको बिषयमा फरक किसिमका बहस चलेका छन । सामान्य अवस्था हुदै गएमा मन्टेश्वरी खोलिनुपर्छ भन्ने कतिपय साथिहरुकाे बिचार छ भने अर्काे तर्फ साना बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमणले चाडो असर गर्ने भएकोले स्थिति सहज भए पछि खाेलाैला भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर पनि मन्टेश्वरि सञ्चालन गर्न राज्य तथा स्थानीय निकायले खाेल्न अनुमती नदिएसम्म खाेल्न हुदैन कि भन्ने बिचारमा Amps Chitwan का कार्यसमिति ,सल्लाहकारज्युहरु तथा सम्पूर्ण मन्टेश्वरिका प्रिन्सिपलहरु रहनुभएको छ। गएको चैत्र देखि सत्तत्तर सालको अहिलेको भाद्र सम्म आउदा मन्टेश्वरीहरु पुर्ण बन्द रहेका छन । यसले गर्दा शैक्षिक सत्रमा मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठुलो समस्या देखा परेको छ । अहिले हामी मन्टेश्वरी सञ्चालकलाई निकै गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नराम्रो गरी असर गरेको छ । बिशेषत २०७५ यता खुलेका र यहि गएको माघवाट खुलेका मन्टेश्वरीमा यसको असर प्रत्यक्ष देखिएको छ ।
२.यो महामारीमा मन्टेश्वरीले कसरी आर्थिक भार कम गर्न सक्दछ ?
▶ कसरी भन्ने सवालनै छैन । किनकी अहिले सवै कुरा ठप्प रहेका छन । मात्र सरकारले निर्देशन गरेको कर र नविकरणमा सहजता भएको छ । केहि मन्टेश्वरीका सञ्चालकहरुले यो प्रकृया पहिलेनै पुरा गरिसक्नु भएको छ । केहिको अझै बाकि रहेको छ । अव मन्टेश्वरी खुलेको भए र सञ्चालनमा आएको भए, कसरी घाटा कम गर्ने भन्ने बिषयमा सोच्ने हो । अन्यथा अहिले अवस्थामा सोच्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । तर अहिले यो बर्षको लागी शिक्षण प्रणालीमा केहि नया योजना सार्वजनिक गदै हामीले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने छाैनाै ।
३.यहाले अनलाई शिक्षा प्रणाली भन्न खोज्नु भएको हो ?
▶ होइन , अनलाइन शिक्षा प्रणाली मेरो रोजाइ र मेरो सल्लाहमा पदैन तर फिजिकल्लि हामी आफु सहभागि भएर यो प्रकृया पुरा गर्न सक्छौ । पछिल्लो समयमा होम ट्युशनमा अभिभावकले धेरै खर्च गरिरहेको अवस्थामा वरु यसलाई कसरी हुन्छ मन्टेश्वरी सञ्चालकसंगको सहकार्यमा आफ्ना नानीवावुलाई अध्यापन गराउन सकिन्छ । यस बिषयमा हामीसंग राम्रा राम्रा विकल्प रहेका छन । प्रशासनले कम्तिमा २५ जनासम्मको भेला गर्न दिने निर्णय जुन छ त्यसले पनि हाम्रो मन्टेश्वरी शिक्षामा ठुलै राहत पुग्दछ । यो बिषयमा हामी मन्टेश्वरी सञ्चालकले ध्यान दिनुपर्ने र अर्काे सकारात्म विकल्प निकाल्न सकिन्छ ।
४.तपाई आफै पनि व्यवसायी हुनुहुन्छ , व्यवसायीलाई कत्तिको मार परेको छ ?
▶ व्यवसायीलाई मार संगै यसले ठुलाे असर परेको छ । हामीलाई मात्र होइन सवै क्षेत्रमा यसको असर परेको छ । अव व्यवसायीलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने बिषयमा सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले मौद्धिक निती मात्र ध्यान दिएको छ । यसको कार्यन्वयनमा पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ । म आफै पनि व्यवसायि भएको कारणले पनि यो लकडाउनमा प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीलाई परेको छ । साना र मझौला स्तरका व्यवसाय त अव विस्थापित हुने अवस्थामा रहेको छ । करिब ५ देखि ६ महिनासम्म बन्द रहेको पसलको भाडा तिर्न पनि गाह्रो अवस्थामा रहेको छ ।
५.अहिले विभिन्न विद्यालयलले अनलाइन शिक्षा प्रणाली अपनाएका छन ?
▶ यस बिषयमा यसको संस्थाको धारणा के रहेको छ ? यो निकै स्वागतयाेग्य काम र प्रयास हो । तर यो किसिमको प्रयासवाट नतिजा कस्तो आउछ भन्ने बिषयमा सम्रग शैक्षिक संस्था र प्रणाली प्रतिक्षामा रहेको छ । चितवनकै हगमा पनि केहि ठुला स्कुलले अनलाई परिक्षाको व्यवस्थाा समेत गरेको छ । मेरो आफ्नै नानीवावुलाई हामीले यो बिषयमा अभ्यास गराएका छौ । तर मन्टेश्वरीको बालबालिकामा भने यो अभ्यास निकैनै कठिन अनि ग्राहो रहेको छ । म आसा गर्छु यसको लागी पनि केहि विकल्प निकल्नेछ ।
पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य समायोजन